Gobolka Baay, Koonfura iyo bartamaha Soomaaliya - MSF Gudaha Soomaaliya- Helitaanka daryeel Caafimaad
MSF outreach team in Diinsor,Somalia© Alexander Glyadyelov
Magaalada Diinsoor waxa ay MSF ku leedahay xarun caafimaad oo 65 sariirood qaadda oo bixisa daryeel bukaan-jiif iyo mid bukaan-socodba. Waaxda bukaan-jiifka (IPD), oo u adeegta dhammaan dadweynaha degmada oo lagu qiyaasey 110,000 oo qof, waxa uu daryeel caafimaad siiyaa carruurta iyo dadka waaweynba, waxaana uu daweeyaa cudurrada qaaxada iyo kala azar; iyo sidoo kale isaga oo quudin ku daweeya carruur ay hayso nafaqo-xumo ba’an iyo xannuunada la hal-maala. Waaxda bukaan-socodka (OPD) waxa ay daryeel daweyn ah iyo mid ka hortag ah oo ay ka mid tahay xarunta quudinta bukaan-socodka siisaa carruurta ay hayso nafaqo-xumada ba’an ee aan xannuun kale qabin.
Mashruuca Baay 2009
Sanadkii 2009kii, 59,920 qof ayaa heley la-talin iyo daweyn lacag la’aan ah. 3,399 haween ah ayaa la-talinta ka dambeysa uurka ku heley bukaan-socod-eegtada halka 801 oo haween ah ay ku umuleen qaybta umulaha. In ka badan 1,600 oo carruur ay hayso nafaqo-xumo ah ayaa lagu daweeyey barnaamijka nafaqeynta ee cusbitaalka. Bishii Disembar waxa kooxaha MSF ay wax ka qabteen jadeeco ka dillaacdey Diinsoor, iyaga oo daweeyey 464 qof oo bilaabeyna olole tallaal oo ballaaran oo lagu tallaalley 11,560 carruur ah oo ay da’doodu u dhaxayso lix bilood iyo 15 sano jir.
Wararkii ugu dambeeyay ee Gobolka Baay
MSF waxa ay ku baaqeysaa in la ixtiraamo xuriyadda socodka/dhaqdhaqaaqa ee shaqaalaha caafimaadka
10.01.2011 | Gobolka Baay, Koonfura iyo bartamaha Soomaaliya
Jineefa/Nayroobi. 5tii Jannaayo 2011, ayaa kormeerayaasha Médecins Sans Frontières (MSF) ee cusbitaalka Diinsoor, Soomaaliya, ay wakiillo ka socda Al Shabaab ay iska hor taageen in ay magaalada ka baxaan. Kormeerayaasha…